I-Semalt Shares Isikhokelo sokungabandakanyi iiTye eziKhe kwi-Google Analytics
Ngaphandle kokugqithisa lewebhu kwi-spam yokuthunyelwa kunye nezinye iintlobo zogaxekile, i-Google ikhuthaza ukukhutshwa kwezithuthi zangaphakathi ekuphuhlisweni nasekuvelweni kwewebhusayithi. Kukho isizathu sokuba abanikazi bafanele ukuthobela oku. Kukho umngcipheko wokuphazamisa ulwazi oluqulethwe kwiziphumo zeGoogle Analytics. Ukuba umntu udala uphando kwiGoogle malunga neendlela apho umntu angazikhuphela khona kwiimbuyekezo zendlela, kukho ithuba lokuba baya kufumana izixazululo.
Nangona kunjalo, ukuhlalutya zonke iinkqubo, eziphakanyiswe ngu-Ivan Konovalov, oyingcali Semalt , uya kuhlahla ukuya kweyodwa yezi ndlela zilandelayo.
Izisombululo zokukhupha ukutyelelwa kotyelelo:
Ukudala icebo kwi-Google Analytics ukukhuphela idilesi ye-IP kuzo zonke iingxelo zendlela.
Ukudala iphepha elinokukhupha elikuhlukanisa namanye amaphepha ewebhu ase-Google Analytics.
Izisombululo njengoko ziboniswe ngasentla zibububuxoki ngombono wam. Okokuqala, akukho idilesi ze IP eziqhelekileyo njengoko zisetyenziselwe ukutshintsha. Kuyinto eqhelekileyo kwi-ISPs ukutshintsha iiliti ze-IP kubabhalisi babo. Ngokuchasene nombono oqhelekileyo, banokwenza njalo rhoqo kunokuba omnye unokucinga..Ukongezelela oku, ukunyuka kwamajelo kunye nokufikelela kwi-intanethi kuye kwenza ukuba abasebenzisi bakwazi ukufikelela kwiiwebhsayithi zewebhu ukusuka nasiphi na indawo. Ngoko ke, kuthetha ukuba ukuzama ukugcina uluhlu lwee-IP zamakheli ezifikelela kwisiza kuya kuba yintlungu yombutho.
Indlela yokwenza iCokie ngokuqinisekileyo isebenza. Nangona kunjalo, kunzima ukudala nokugcina iphepha elijoliswe ekusekeni ikhukhi. Kwakhona, ukuqinisekisa ukuba i-cookie isebenza okanye ukuba ikhona kumsebenzi onzima ukuwugqiba. Ukuba umntu akakwazi ukulandelelana apho ikhukhi ye-browser yakho ithetha ukuba kufuneka benze i-cookie entsha rhoqo xa bezama ukufikelela kwisayithi, ekubonweni kwam, kuyinkathazo.
Ngaphandle kweeNdawo zoLuntu zeNgingqi
Ukuba umntu uqhuba uvavanyo lwewebhu kumncedisi wendawo, kunengqiqo ukuba awufuni ukuba olu tyelelo lurekhodile njengomtyeleli. Ngako oko, umntu makangabandakanyi oku kuhamba kwendlela. Omnye uza kudala ibhukmakhi equka ipharamitha yesicelo kwi-URL. Ukulandela oku, banokuwusebenzisa ukufikelela kwisiza kwaye abayi kuba namavarekhodi abathintelo bezithuthi zendawo. Ukongeza, ukongeza i-cookie kule khowudi isilumko, okanye sebenzisa ukugcinwa kweendawo ukuqhuba iimvavanyo kuba igcina zonke izinto ezikhethiweyo ezenziwe. Ngalokhu, akufuneki ukuba enze umyalelo wokubandakanya iparameter eceliwe. Ukufumana ikhowudi epheleleyo, tyelela i-www.tjvantoll.com kwaye uphendule indlela yokukhupha ukutyelela okubakho kuphuhliso kunye nokuveliswa kwewebhusayithi.
Kukho ukhetho lokudibanisa zombini iindlela apho ukhetho olungabandakanywa luzo zonke izithuthi zendawo kunye nazo zonke ezinye iimaphepha ezihlalutyo zazo.